कतारबाट बाँके आएका तीन नेपालीको पहिचान खुल्यो – Sadarline
१२ चैत्र २०७६, बुधबार १७:४४
नेपालगञ्ज : चैत ४ गते फ्रान्सबाट नेपाल आएका बाँकेका ३ जना ब्यक्तिको पहिचान खुलेको छ । फ्रान्सबाट कतार हुँदै नेपाल आएकी १९ वर्षीया युवतीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि सोही बिमानमा आएका ब्यक्तिहरुको खोजी शुरु गरिएको थियो ।
सोही बिमानमा नेपाल आएका बाँकेका ३ जनाको पहिचान खुलेको हो । जसमध्ये दुई जनालाई क्वारेन्टाईनमा राखिएको छ । बाँकेका प्रहरी नयाब उपरीक्षक शिवबहादुर सिंहले दुई जना सम्पर्कमा आईसकेको र अन्य एकको पनि पहिचान खुलीसकेको बताए ।
दुई जनालाई महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस भित्र रहेको क्वारेन्टाईनमा राखिएको सिंहले बताए । साविकको प्रिपहवा गाविस वडा नं. ९, बनकटवा वडा नं. ६ र साईगाउ २ का तीनजना प्रहरीको सम्पर्कमा आएका हुन् ।
जसमध्ये एक जनालाई लिन प्रहरी परिचालन गरिएको उनले बताए । केन्द्रबाट आएको नागरिकता नम्बर भिडाउँदा तीन जना बाँकेकै रहेको पुष्टि भएपनि एक जनाको ठेगाना खुल्न सकेको छैन । यद्यपी उनी बर्दियाको हुनसक्ने प्रहरीको दावी छ ।
सदरलाइनडटकम, काठमाण्डौ : भारतको मध्य प्रदेशका पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथले राजीनामा दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सबै पत्रकारहरूले क्वारेन्टाइन बस्नु पर्ने भएको छ । उक्त सम्मेलनमा सहभागी मध्येका एक पत्रकारकी छोरीलाई कोरोना संक्रमण पाइएको हो । त्यस्तै, पत्रकारलाई परिक्षण गर्दा उनमा समेत कोरोना पोजेटिभ देखिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् […]
२३ भाद्र २०७७, मंगलवार १२:२५
९ कार्तिक २०७६, शनिबार १४:३३
२८ असार २०७८, सोमबार १९:१५